Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Guam » Manatevin-daharana ny programa fampanantenan'i Håfa Adai i Atkins Kroll
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Guam • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny Birao Mpitsidika ao Guam (GVB) dia nanambara fa ny Atkins Kroll Inc. dia naka ny Håfa Adai Pledge (HAP) anio tolakandro tao amin'ny AK Showroom any Tamuning.
Manamafy ny fampanantenan'ny GVB hitazona ny lovany ho velona manerana ny fikambanana io toky io.
AK Showroom dia ho ampahany iray lehibe amin'ny fanampiana ireo mponin'ny nosy sy ireo mpitsidika hahatongavana amin'izay alehany.
Ny lanonana fanaovan-tsonia dia nanamarika ny fahavononany hitahiry ny fiteny, kolontsaina ary ny fomban-drazana Guam.
“Amin'ny maha orinasa lehibe indrindra an'i Guam anay, dia manolo-tena tanteraka izahay amin'ny fitahirizana ny fiteny, ny kolotsaina ary ny fomban-drazana. Ny fanatanterahana izany fampanantenantsika izany dia manamafy ny fampanantenantsika hitazona ny lovantsika ho velona mandritra ny fikambananay, hoy ny filohan'ny AK Wendi Herring. “Raha mankany amin'ny fanarenana ara-toekarena ny nosintsika, dia tianay ny hahafantaran'ny vondrom-piarahamoninay fa ho tonga eto izahay isaky ny mandeha, toy ny efa nisy nandritra ny 107 taona lasa. AK dia ho an'i Guam ary eto mandritra ny fiainana, "hoy i Herring nanampy.
"Faly izahay mandray an'i AK ao amin'ny fianakaviana Håfa Adai Pledge," hoy izy GVB Talen'ny Fikarohana momba ny fizahantany Nico Fujikawa. “Ampahany lehibe amin'ny fanampiana ireo mponin'ny nosy sy ny mpitsidika azy ireo hahatongavana amin'izay tokony halehany izy ireo. Ity programa fampanantenana ity dia mihoatra ny fiarahabana tsotra an'i Håfa Adai. Mampiditra ny soatoavina fototra amin'ny inona izy io Guam tsy manam-paharoa amin'ny fanaonao isan'andro. ”
Ny lanonana fanaovan-tsonia dia nofaranana tamin'ny famelomana fetsy ho an'ireo nanatrika.
Atkins Kroll, orinasa Inchcape, no mpaninjara fiara be indrindra ao Guam, ny Nosy Mariana Avaratra ary Micronesia ahafahany manome vokatra sy serivisy feno ao amin'io faritra io. Atkins Kroll no orinasa tranainy indrindra ao Guam naorina tamin'ny taona 1914 ary misolo tena ny Toyota, Lexus, BMW, Chevrolet, Toyota Rent A Car, ACE Rent a Car, ary ny marika AC Delco.
Ny Håfa Adai Pledge no vato fehizoron'ny programa momba ny marika eo amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana an'ny Guam Visitors Bureau. Ny programa Håfa Adai Pledge dia nitombo hatrany tamin'ny isan'ny mpandray anjara ary koa ny atin'ny fianianana isam-batan'olona hatramin'ny nanombohany ny taona 2009. Maherin'ny 940 ireo orinasa tsy miankina, masoivohom-panjakana, fikambanana tsy miankina, fikambanana ary ankizy an-tsekoly no nandray izany. olona maherin'ny 44,000 eo an-toerana sy any ivelany.